Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamani zokuPhula » Urhulumente omtsha waseJamani ukwenza intsangu ibe semthethweni
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Urhulumente omtsha waseJamani uza kugunyazisa ukusetyenziswa kwentsangu ngokusemthethweni
Isivumelwano sikarhulumente womdibaniso phakathi kwe-Social Democrats yelizwe, iFree Democrats kunye neGreens ibandakanya amalungiselelo okuthintela ukusetyenziswa kwentsangu.
Ngokweengxelo zamva nje, urhulumente omtsha womanyano we Jemani iya kuseka inkqubo 'yokuhanjiswa okulawulwayo kwe-cannabis kubantu abadala' ukwenzela 'ukusetyenziswa kokuzonwabisa' ngeevenkile ezinelayisensi.
Ngokwesicatshulwa soxwebhu olufunyenwe ngu isiJamani iindaba, isivumelwano sikarhulumente womdibaniso phakathi kwelizwe Social Democrats, Free Democrats kunye Greens ibandakanya amalungiselelo ukuba ukusetyenziswa intsangu kube lulwaphulo-mthetho.
“Umbutho ufuna ukunyanzelisa ulawulo olungqongqo lwemveliso ukuqinisekisa umgangatho wayo kunye 'nokhuseleko lwabantwana,'” sitsho isivumelwano.
Ilungiselelo lokugunyazisa ukuzonwabisa ngokusemthethweni i-cannabis yavuza kwiveki ephelileyo isiJamani imidiya ngemithombo kuwo omathathu amaqela. Intsangu yonyango ibisemthethweni kwi-European Union ukusukela ngo-2017.
Umjikelo wokugqibela weentetho zomdibaniso weendlela ezintathu wabanjelwa eBerlin. Idemokhrasi kwezentlalo u-Olaf Scholz umiselwe ukuba athathe isihlalo sika-chancellor, ethatha indawo yegqala laseJamani u-Angela Merkel, ongazange afune ukunyulwa kwakhona.
I-Merkel's Conservative Christian Democratic Union (CDU) kunye namahlakani avela kwi-Christian Social Union eBavaria (CSU) babonise ukusebenza kakubi kunyulo lukaSeptemba, ngelixa iqela likaScholz lifumene iinzuzo ezinkulu. Iqela elisekhohlo le-Social Democratic Party (SPD) likhethe ukuzimanya kunye ne-left-wing Greens kunye neFree Democrats (FDP) kunokuba ifune entsha, ebizwa ngokuba yi-'Grand Coalition' kunye ne-Christian Democrats.